Uhambo lomsebenzi wokuzingela U-Antony Raj Jayamani e-Dubai
Uhambo lokuthandana ngothando ngoTilal Liwa Resort
I-Dubai City iyindawo engummangaliso!
E papashwe ngu Inkampani yeSixeko sase Dubai at Juni 10, 2019
Uhambo lokuzingela umsebenzi - Jonga ngaphantsi kwinqanaba enye!
Ngoku buyela kwinjongo ephambili ye utyelelo lwam, umsebenzi wokuzingela. Kwiiveki ezimbini ndiye ndabona ukuba imeko ayinjengoba bekuthenjisiwe, kufuneka ndikhangele lo msebenzi ndihlala kuwo. Yayindothusa le nto kodwa inyani ayinakuphikwa. Emva kweeveki ezimbini zokujonga, bendiqinisekile ukuba ndiza kuyifumana into kungekudala kwaye ndifuna ukuvalelisa kubamkeli bam ngokukhawuleza. Ndandingafuni ukuba ngumthwalo kubo nangona bengazange bandenze ndizive ngathi, ndandingakhululekanga. Bajikeleza i-CV yam kwinethiwekhi yabo yezentlalo nezobuchwephesha, bacwangcisa amaphephandaba athile apho ndaye ndicofe imisebenzi efanelekileyo kum ehambelana neprofayile yam. Kusisiqalo nje.
Uhambo lokuzingela umsebenzi lwaludinga indlela yokunxibelelana, ngenxa yesi sizathu abo babeze kundithengela inethiwekhi yeselfowuni, inkampani esandula ukuqaliswa ngelo xesha yayiyi-DU. Njengoko bendisaqhubeka tyelela i visa, ke ngoko, bekuya kuba nzima kum ukuthenga isamp. Ukuba bendikhethile inethiwekhi bendiya kuba ndiye ku-Etisalat. Njengoko i-Etisalat yayikuphela kothungelwano olukhoyo ngaphambi koko, olwaluseke inethiwekhi kuyo yonke i-Middle East. Kodwa ababamkeli bam bandikhethele i-DU kwaye yayindlala zonke iimfuno zam zonxibelelwano. Ke yayilungile kum.
Ngeli xesha ndandinamava okusebenza okurhwebo lokuhamba kuphela, ngoko ugxininiso lwam lwaba ukufumana umsebenzi kwicandelo elinye. Indawo endijolise kuyo yayiyi-Abu Dhabi njengoko ndandihlala apho. Njengoko UAE lelona lizwe lityelelweyo kakhulu kwaye imisebenzi yabakhenkethi ihlala isezingeni lazo ke bendiqinisekile ngokufumana lo msebenzi. Ukulungiselela le njongo, ndindwendwele iiMall, iiSaqs indawo zorhwebo apho zifunyenwe iiofisi zearhente yokuhamba. Ndasasaza i-CV yam njengephamflethi okanye iflaya. Kwakuyinkxalabo kunye nesicic kum xa ndifaka isicelo akhawunti umsebenzi wokuhweba kwezohambo endikufumene nawo, ndabuzwa malunga nesigqibo esifanelekileyo andingenanto kunye neentengiso apho i-qualification yayingengomcimbi kodwa ngaba amava ayenombuzo, engangenayo. Naluphi na ukuphendula okuqhelekileyo kwizicelo zam.
Emva kokubuyela umva kumalinge am okuqala ndatshintsha icebo lam, ndaphinda ndakhangela indlela endikhangela ngayo ndakhangela umsebenzi kumhlaba ongenguye urhwebo lokuhamba. Olunye luyachuma ishishini ibiyinkampani zotshintshiselwano, ezijongana ngokweendidi ezininzi. Ukuhamba, ukutshintshiselana ngemali kunye nezindlu kunye nezindlu Ndizamile ithamsanqa lam kodwa ngelishwa iziphumo ziye zafana.
Bendiqala ukukhathazeka mihla le, akukho nto yenzekayo njengoko bendilindele. Bendihlala ndisiya mihla le kwi-intanethi kwi-intanethi ukuze ndifake isicelo kwi-intanethi, ndithumele i-CV yam, ndijonga izithuba ezitsha. Ndaya eDanata, Emirates iofisi e-Abu Dhabi ngethemba lokufumana impendulo efanelekileyo. Kubushushu obutshisayo be-Abu Dhabi ndakhwela ezindleleni. Ndiyilibele ngesizathu ngoku kodwa ndiyayazi injongo, eyayiza kuba yinxalenye yoluntu olukhulu kangaka.
Ndikhulise irediyo yokukhangela ndisuka e-Abu Dhabi ukuya kwamanye amazwe e-UAE ndityelele uSharjah, Al Ain, Ras Al Khaima kunye dubai kunjalo. Ndifumene, ngaphandle kwe-Abu Dhabi, Dubai kunye ne-Sharjah amathuba okufumana umsebenzi kwamanye amazwe akwebi kakhulu. Ndiye ndagxila kwi-3 ithi, i-Abu Dhabi yahlala iphambili. Ngoku xa ndikhanyayo, ndiye ndabona ukuba ndenze into engaqhelekanga ngokuthelekiswa nendlela yam yokuphila eLahore, ePakistan. Ndandinentloni kakhulu kwaye kunqabile ukuba ndihambe ngaphandle kwedolophu. Kodwa kwi-UAE ndandihambahamba njengesiqhelo. Ndandihamba ndodwa ndisiya kwelinye ilizwe ndikhangela umsebenzi. Yayilixesha lobomi kum.
Ukuhamba ngeendlela ze-UA E akuzange kubonakale njengokukhathala, njengoko izakhiwo eziqhaqhaqhaqisayo kunye nenkcubeko ziye zandiphazamisa lonke uhambo lwam. Ndandifuna ukuyonwabela yonke imzuzu yalo kodwa uloyiko lwaluqhaqhazela emlonyeni wam njengoko imizamo yam ingazange ikhule. Ukulahleka kwexesha kunye nemali kwakungandithusa. Ndishiya ubomi obuhleliweyo ePakistan ngokuziphathisa amaphupha am. Ndandifuna ukuba yinxalenye yoluntu lwamazwe ngamazwe apho ndifunda khona iimpawu ezilungileyo zezinye iinkcubeko kunye nokuphumeza ebomini bam.
Imfundo yam ibonakala ngathi ayikho e-UAE ndandicinezelekile kwaye ndiphelelwe yithemba. Amathemba am onke ayaphazamisa phambi kwam.
Njengoko kusithiwa umanzi ubambise umntu etyeni, ndaya kwinkampani eyenza izinto ezibonakalayo ngokubhekisele kwabo bendibaphethe. Umntu endithunyelwe kuye yayingu umlawuli kwinkampani kwaye yayingu Pakistani Kananjalo ngubani owahamba nezihlobo zakhe waya e-UAE kwii1980s. Bafune indawo yokusabela kwi-UAE ukuba babalekele ukuhlaselwa ngumphathi-mkhosi wase-General Zia ngelo xesha.
Ngoku ngoku ndibuyele kwinkampani, yayiphatha ishishini kwi-cranes. Bonelela ngeekhreyithi kwiindawo zokwakha. Liyachuma ishishini njengoko ulwakhiwo lungazange luyeki e-UAE ndadibana nomntu owayethambile. Uye wandinika uxanduva kwi-akhawunti yesebe lenkampani. iofisi yayo yayiseDubai, enye yenqaba ende enkulu engazange ibonakale nokuba ndijika intloko yam ukuya kwinqanaba le-90 ngqo. Kwakuloo nqaba ye-tower yayinamagumbi angama-4 eofisini. Apho ndadibana okokuqala ebomini bam nayiphi na i-Baloch (iphondo lasePakistan). Wayengumntu obalaseleyo. Wandamkela ngezandla zozibini. Yonke ingcinga ephosakeleyo endiyivileyo malunga ne-Baloch yavele yamka. Ngamana loo mntu wayephantsi kwempembelelo yenkcubeko ye-UAE. Le yayiyeyona nto kanye endakha ndanayo kwiindlela nakwizitalato ze-UAE kwaye kwakhona kwiiofisi kunye nobomi bobuchwephesha. Ebefana nomcebisi wam. Undifundise isoftware yobalo-mali esetyenziswa yinkampani inokuba yiPeachtree, andikhumbuli ngoku. Yayingamava amnandi, abasebenzi baseofisini uninzi lwabo yayinguPakistanis abambalwa Ma Indiya kunye nePhillipinos. Ndimele ndikhankanye ubuzwe be-UAE ukuba bakhetha uPhillipinos njengomsebenzi wekhaya labo ngelo xesha. Khange ndibenombono banokuthi ngaba bathembeke ngakumbi okanye abasebenzi kwezoqoqosho, abanalo nhlobo icebo.
Yayingamava am eentsuku ze-4 kuloo ofisi. Ndanikwa i-AED 2,500 qho ngenyanga apho baya kunciphisa i-AED 200 ngenyanga ivisa iindleko. Indawo yokuhlala kunye nokuhamba ukusuka kwindawo yokuhlala ukuya eofisini nasemva yanikwa yinkampani. Andonelisekanga koku, njengoko kwakungekho njengoko bendilindele. Iiyure zomsebenzi ziye zaqala ukusuka kwi-7 kusasa ukuya kwi-7 emva kwemini nge-2 ikhefu losuku olwaluza kuchithwa eofisini, njengoko kwakungekho nto eyayinokwenziwa ngexesha elishushu phakathi kwemini.
I-visa bacebise ukuba ndiphume kwesitampu ekufuduka kwamanye amazwe bangene eKeesh kwaye sifake kunye ne-2 iminyaka yokuthengisa i-visa, kwathiwa yinto eqhelekileyo yokusebenza. Indawo yokuhlala yayiyindlu ye studio e-Sharjah eyabelwe ngabantu be-12, kwakuneendawo zokuhlambela ze-2 kuphela. Kwakungekho nto yangasese kukho konke. I-ofisi yezothutho yayilungiselelwe ukuba ihambe kwiofisi kwi-6 ukuze ndifumane i-van kufuneka sikulungele phambi kwe-6 ngenxa yokuba kufuneka silawulwe kwaye siqale usuku kwi-5. Okokuqala kufika kuqala umthetho wamahhala wawusetyenziswe kwiindawo zokuhlambela. Lo msebenzi okhuselekileyo wandicaphukisa kwaye njengoko ndandingenakuneliswa ngumnikelo, wandenza ndacinga ukuba ndifumane ngcono okanye ndibuyele ePakistan.
Andizange ndaneliswa yimeko yonke. Nge-6 xa sishiya kwiofisi kuthatha imizuzu ye-45 ukuba sifinyelele. Kwakuyi bhuloho kuphela apho safuneka siwele khona singene e Dubai ukusuka eSharjah. Ngenxa yeeyure zeeofisi zephikelelo yayisetyenziselwa ukukhawuleza ngokukhawuleza imihla ngemihla. Ngoku njengokuba ndingenelisekanga yonke i-vibe endiyifumanayo yayingalunganga. Yonke into efanelekileyo malunga ne-UAE yachithwa. Kukho rhoqo imithwalo esimele siyenze ngaphambi kokuba siphumelele. Ndicinga ukuba andingazange ndikhule ngokwaneleyo ukuqonda oku. Nantoni ngoLwesine eyayikugqibela ngomhla wokusebenza ngeveki ndifuna ukuchitha iveki kunye nemikhosi yam e-Abu Dhabi.
Emuva e-Abu Dhabi ndaxubusha le ngxaki kunye nabam iindwendwe kunye nosapho yam ePakistan. Imikhosi yazi ukuba oku kwenzekayo bandicebisa ukuba ndiyithwala ixesha elide, izinto ziya kuphucula. Njengoko lam namava adlulileyo kunye nabo malunga nomsebenzi wokuba ndandingafuni ukuphulaphula, intsapho yam yasePakistan yaxhasa isigqibo sam sokubuyela. Kwafuneka ndifune umsebenzi xa ndibuya, ndizimisele ukubeka ingozi ngenxa yokuba ndiyazi ukuba intsapho yam isemva kwam. Ukwahlukana okubalulekileyo kunye nokubaluleka kokuphila ePakistan naseDaibhu yintsapho. Omnye uthe ukuba ufuna ukuhamba ngokukhawuleza uye wedwa kodwa ukuba uhambe ixesha elide uze uhambe kunye. I-UAE yayikuhambo lwam olude. Andizange ndilungele ngokupheleleyo. Ndagqiba kwelokuba ndibuyele.
Kamva emva kwonyaka, ndava inkampani apho ndanikwa umsebenzi yavalwa njengoko kunjalo isigqibo sokushiya eso siphononongo saqinisekisa ngokufanelekileyo. Uqoqosho olukhula ngokukhawuleza olunjengeenkampani ze-UAE zisebenza kwaye zivale ngezinga elifanayo.
Nantsi ndiyanyanzelekile ukuba ndikhankanye nomqhubi weteksi odala wasePakistan e-Abu Dhabi, oye wabhekisela emithini kwi-greenbelt yendlela ngexesha lokukhwela, ukuba sizityala ngezandla zethu eRamadan ngokukhawuleza. Ndibulisa isibindi somntu othe wanquma ukushiya intsapho kwaye wadlala indima ebalulekileyo ekuguqulweni kwe-UAE ekhoyo ngoku. Ndabuya emva kweenyanga ze-2 zohambo lwama-epic. Nangona ndandisa ikhefu lokubuya kwamatikiti kabini ngethemba lokufumana into efanelekileyo kodwa yayingenanto. Emva kokubuya kwam, andizange ndidikibe umntu ondibuzayo nge-UAE ndandisoloko ndikholelwa ukuba kwakuyixesha elizeleyo kwaye kungenakuba ngumntu wonke. Wonke umntu makakhuthazwe ukuba athathe ithuba lokuphila amaphupha abo. Ndandixelela ukuba ihlobo alikho ixesha elifanelekileyo lokuzingela umsebenzi. Ngoko cwangcisa ukususela ngo-Oktobha ukuya kuMatshi.
Ekubuyeleni kwam UAE wayenomnene kakhulu ukundinika isipho sobutyebi nokuphana kwakhona ngesimo sabasebenzi basemfudumeni abavumela ukuba ndihambe kakuhle, nangona suku lokugqibela lokuqinisekisa i-visa. Baye bathatha ixesha lokuba baqinisekise kodwa bangivumela ukuba ndishiye kweli lizwe ngenhlonipho.
Emva kweminyaka eyi-11 ndicinga ukuba bekube ngcono ukuba ndihlale kodwa kungcono ukuba ndibuyele. Ndandiqala ukubona ubomi ngokucacileyo ngakumbi kwaye ndisombulula. Ndenze utshintsho oluthile lobuqu kumntu wam emva kokubuya. Ndiyazi ukuba andinakukugubungela iinyanga ze-2 ezigcwele uhambo lwezithuba kwi-5000 ngamazwi kodwa ndabhala oko ndikhumbule. Ndabhala konke ukuba yinxalenye yembali. Kwiminyaka emininzi ezayo eli bali elililiweyo linokuphinda liphindwe kwakhona. Ndiqinisekile ukuba ibali lam liya kufundwa njengentetho kunye nesifundo. Ngale nto ndiyakhunjulwa nangemva kokuba andiyi kuba. Imibhalo yam ingenza i-historian ebone i-UAE ngeembono ezahlukeneyo.
Siyabonga, i-UAE uya kuhlale ukhunjulwa njengomfundisi omkhulu kunye nomcebisi. Ngamana ungahlala ukhula kwaye uphumelele amaphupha abantu.
Uhambo lomsebenzi ukuzingela i-2 kunye no-Antony Raj Jayamani. Ukwazi ukugxila ekukhangekeni kwengqesho kwaye wakwazi ukufumana umsebenzi kwintsimi enye.
Inkampani yeSixeko sase Dubai ngoku kubonelela ngokulungileyo guides Imisebenzi eDubai. Iqela lethu lagqiba ukongeza ulwazi kulwimi ngalunye kolwethu Imisebenzi e-Dubai Guides. Ke, unale nto engqondweni, ngoku unokufumana izikhokelo, iingcebiso kunye nomsebenzi kwi IUnited Arab Emirates ngolwimi lwakho.
Yintoni omele uyenze e Dubai